ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ. ဟော့စတက်ဒ်၏
ⓘ ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ. ဟော့စတက်ဒ်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ မှာ ယဉ်ကျေးမှု အချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံရာတွင် အသုံးချသော မူဘောင် တစ ..
ⓘ ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ
ဟော့စတက်ဒ်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ မှာ ယဉ်ကျေးမှု အချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံရာတွင် အသုံးချသော မူဘောင် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဂီး ဟော့စတက်ဒ်မှ စတင် ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသီအိုရီမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ ခံယူထားသော စံသတ်မှတ်ချက် တန်ဖိုးအား မည်သို့ သက်ရောက်မှု ရှိသည်၊ ထိုအချက်မှ ၎င်းတို့၏ အပြုအမူများနှင့် မည်သို့မည်ပုံ ဆက်စပ်နေသည် တို့ကို ဖော်ပြထားပြီး ကိန်းခွဲခြင်း နည်းလမ်းဖြင့် စိစစ် ဖော်ထုတ်ထားသည်။
ဟော့စတက်ဒ်သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အတွင်း အိုင်ဘီအမ် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ၏ ခံယူမှု စံသတ်မှတ်ချက် တန်ဖိုး အပေါ် ကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းအား ကိန်းခွဲခြင်း နည်းအားဖြင့် ရလာသော ရလဒ်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ၎င်း၏ မူလ မိုဒယ်လ်အား ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ မူရင်း သီအိုရီတွင် ယဉ်ကျေးမှု စံသတ်မှတ်ချက် တန်ဖိုးတို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင် ဒိုင်မန်းရှင်း ၄ ခုအား တင်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာ ပုဂ္ဂလဓိဌာန်ဝါဒ-စုပေါင်းဝါဒကွဲပြားမှု၊ မရေရာမှုများကို ရှောင်လွဲမှု၊ အာဏာ ကွာဟာမှု လူမှုရေး အဆင့် ကွာဟချက် အနည်းအများ နှင့် ပုရိသဝါဒ-ဣတ္ထိယဝါဒ ကွဲပြားမှု အလုပ်ဦးစားပေး သို့မဟုတ် လူဦးစားပေး တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဟောင်ကောင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သီးခြား သုတေသန တစ်ခု ကြောင့် ဟော့စတက်ဒ် အနေနှင့် ပဉ္စမမြောက် ဒိုင်မန်းရှင်း ဖြစ်သော အရှည်ကို မျှော်တွေးမှုအား ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို အချက်မှာ မူလ ပါရာဒိုင်းတွင် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှုမပြုခဲ့သော အချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ တွင် ဟော့စတက်ဒ်သည် ဆဋ္ဌမမြောက် ဒိုင်မင်းရှင်း ဖြစ်သော အပျော်ကျူးမှုနှင့် မိမိဘာသာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအား ထည့်သွင်း ခဲ့သည်။
Wikipedia: ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ